မယ်သံ: အောင်းမေ့ဘွယ်၇ာ ရွှေတမာ (၁)
Thandar Lwin January 11, 2011 at 8:31 PM
မသန္တာလွင်... သူများအကြောင်းတွေချည်း မရေးနဲ့နော်...
ကိုချက်ကြီးေ၇ ကျမအကြောင်းကေ၇းစ၇ာ အထူးမရှိလို့ ပါ။ရှိ၇င်ေ၇းချင်တာပေါ့ ။
Well done, sister,,,the title suggests this is the first of so many to come...:D...
Congratulation for your debutant post. It really able to make our rusted memories to refresh...We, ex-students, looking forward your serial posts pertaining the smell of our unforgettable CGTI Campus life.
မျိုးဆက်သစ်ညီကိုမောင်နှမတွေရေးတဲ့စာတွေဖတ်ရမှဘဲ ကျောင်းနဲ့ဝေးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးဖြစ်နေတာသတိထားမိတော့တယ်။ ရေစင်ကြီး၊ရွှေတမာ၊ကြိုဆိုပါ၏၊အင်းလေး၊ငပလီ ..မနေ့တနေ့ကအဖြစ်ပျက်တွေလိုပါဘဲလား
ဟုတ်ပ.. ကို၇င်ချမ်းငြိမ်းပြောမှေ၇စင်ကြီးကို သတိ၇မိတယ်။
ဇင်မင်းငြိမ်းေ၇ .. ဘလော့မှာ ဘဟုသုတ ၇စ၇ာအပြည့်ေ၇းတတ်ရုံမက